Mwari chete ndivo vanganditonga?
Ndinofarira kukurukura kwaMwari muupenyu hwedu, kunyange kana munhu akasabvumirana neni nezvazvo. Kukurukurirana kunogona kuwana chaicho kuoma chaiyo nokukurumidza zvazvo-kunyanya kana tiri kutaura pamusoro nharo nyaya. Hazvinakidze...
Pose pandinonzwa kuposita mifananidzo mhuri yangu evanhu vezvenhau, mhinduro dziri mafaro nguva dzose. Zvinonyanyozivikanwa, "Mwanakomana wenyu Wakanaka!"Kana kuti" Chii mhuri chakanaka!"Asi mumwe wavo...
Ko ava muKristu kureva mugumo mafaro wangu? Ndizvo inonakidza mubvunzo uye ndinofunga ane munhu kubvunza. Pane imwe mufananidzo chiKristu chiri kazhinji kupendwa. Apo vanhu...
5 Ngozi Social Media
Guest pambiru kubva Jessica Barefield Regai kutanga nokupa Disclaimer. Nyaya iyi haisi sei zvakaipa evanhu vezvenhau ndiko. Zvinoshandiswa mwero, nemoyo yakarurama mamiriro, zvinogona kudaro...
Kana muri achipfuura nguva yakaoma, vanhu havasi kuziva zvokutaura. Mhedzisiro maturo clichés kana trite kuedza ufare. Ndagara ndine dambudziko ne cliché...
Uri Not Vakarurama Enough
Ose zvino ndipo pandichazofunga kutaura munhu anoti vanoda kuva muKristu, asi ivo vanofunga nguva chaizvo hazvina zvakanaka. Pandinovabvunza nei, vanoti...